Dabeylaha Template: Ka dib Saameynada Moodellada Fiidiyowga | Abuurista khadka tooska ah
Naqshad Template Ka dib Saamaynta Template Model
Templatemonster.com horeyba waa mid caadi ah, mid ka mid ah boggagaas oo aad ugu soo noqnoqonaysid arrimo ama fikrado. In ka badan 14 sano oo ay ku jirtay adeegga naqshadeeyayaasha webka, iyo 30.000 oo sheybaar ah oo la heli karo, waxay durba noqotay halbeeg lagu qiimeeyo isbeddellada ugu dambeeyay ee qaabeynta suuqgeynta internetka iyo mareegaha, iyadoo hal ku dhiggeedu yahay «Wax kasta oo aad raadineyso, Halkan waxaad ka heli doontaa waa! ».
Macno malahan waxaad raadineyso maxaa yeelay wax walba way jiraan: Mawduucyada WordPress, Mawduucyada HTML, Magento, Joomla, PrestaShop, Drupal, Shopify ... iyada oo loo marayo qaabab loogu talagalay Power Point iyo xitaa u adeegista arrimo ka dib 'Effects', waana halkaan ku joojin doonno.
Ka dib saamaynta arrimo ka Template Monster
In ka badan 250 fiidiyowyo fiidiyowyo leh animations si heer sare ah loo shaqeeyay oo ku jira arrimo ka dib Dhibaatooyinka taasi guud ahaan waxay ka socotaa 67 euro wixii ka dambeeya, (qaar baa ka jaban, waxay kuxirantahay mowduuca), oo leh nashqado nadiif ah oo la shaqeeyay, oo aan laheyn iyo madadaalo, dhadhanka oo dhan iyo dhammaantoodna aad waxtar u leh. Haddii aadan aqoon meesha aad ka bilaabeysid muuqaalka bandhigga shirkaddaada, ha ku mashquulin noloshaada, midkoodna qaababkan aad xallisay. Waxay ku saleysan yihiin sooyaal leh walxo ay ka mid yihiin walxaha dhaqaaqa, khadadka ama kiniiniyada iyo xarafka xaragada ah. Monster Template wuxuu bixiyaa nidaam shaandheyn loogu talagalay raadinta iyadoo loo eegayo qaybaha, taariikhaha, noocyada, midabada iyo qaababka.
Ka dib Raadka Saamiyada Ecards-ka Fiidiyowga ah ee laga soo qaaday wuxuush Template
Moodooyinka fiidiyowga ee Saameynta Kadib Waxay u kala qaybsameen afar qaybood: Intros (cinwaanada u furan fiidyowyada), horumarinta astaanta, Qeexitaannada baakadaha garaafka leh ee qeexan iyo waxa ay ugu yeeraan Ecards-ka Video ama kaararka elektaroonigga ah, waayadan dambe caan ku ah sameynta salaanta kirismaska, maalmaha dhalashada iyo nooc kasta oo dabaaldeg ama sanad-guuro ah.
Hubso inaad ku dhex milicsato wax kasta oo bahalkan dhabta ah ee sheybaarku bixinayo. Abuureyaashooda waxay ku daraan inta udhaxeysa 450-500 naqshad cusub bil kasta, oo leh taageero farsamo oo bilaash ah oo la heli karo 24 saacadood maalintii, maalin kasta oo sannadka ah (24/7/365). Waxay sidoo kale daabacaan casharro iyo hagitaan deg deg ah, iyo sidoo kale sharaxaad faahfaahsan oo ku saabsan alaabtooda iyo cusbooneysiintooda.
Waxaad ka arki kartaa dhammaan sheybaarada sawir-gacmeedyada 'Monster' After Effects 'halkan. Fiidiyowga Qaabdhismeedka Naqshaddiisa
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » habyaalada » Naqshad Template: Ka dib Saamaynta fiidiyowyada fiidiyowga ah
Nooca naqshadeeyaha Affinity 1.5 wuxuu ku yimid qiimo dhimis iyo xirmo naqshadeynta websaydhka oo bilaash ah
Wacom waxay ku adagtahay kiniiniyada hal-abuurka leh MobileStudio Pro